1. Chii chinonzi Linaclotide (Linzess)?
2. Linaclotide inoshandiswa chii?
3. Ndeipi michina yekuita yeLinaclotide?
4. Linaclotide inofanira kushandiswa sei?
5. Ndeipi kipimo cheLinaclotide (Linzess)?
6. Ndeapi mhedzisiro inogona Linaclotide kukonzera?
7. Ndeapi madhiragi kana ma supplements anowirirana neLinaclotide?
8. Ndeapi mutsauko pakati peLinaclotide uye lubiprostone?
9. Ndeipi imwe ruzivo nezveLinaclotide yandinofanira kuziva?
Linaclotide (Linzess) ndeye FDA-yakabvumidzwa yemuromo mushonga unowanzo shandiswa nevarwere vakuru vanoona kusapora kusingaperi kana kupomhodza nekuda kwekusatsamwa hura syndrome. Linaclotide 851199-59-2 inouya pamusoro pechinyorwa chekirasi itsva yezvinodhaka inonzi inonzi guanylate cyclase-C agonists.
Linaclotide zita rezita ndiLinzess uye zvakakosha kuti uzive kuti panguva yacho hapana Linaclotide generic vhezheni. Saka, kana iwe uchitsvaga Linaclotide yekutengesa kana yekushandisa pachako, tarisa kune vanobiridzira online vatengesi vezvinodhaka online vanogona kunge vari kutengesa zvisiri pamutemo. Linaclotide generic mushonga.
Linzess ndeye guanylate cyclase-C agonist uye 14-amino acid peptide. ndiro remakemikari zita rekuti L-cysteinyl-L-cysteinyl-L-glutamyl-L-tyrosyl-L-cysteinyl-L-cysteinyl-L-acaraginyl-L-prolyl-L-alanyl-L-cysteinyl-L-threonyl-glycyl- L-cysteinyl-L-tyrosine, cyclic (1-6), (2-10), (5-13) -tris (disulfide).
Fomu rayo remamoleji ndiC59H79NX15OXXUM21 nepo huremu hwayo ari 6.
Linaclotide poda yakachena kusvika-chena uye inosungunuka zvishoma mumvura. Inogona zvakare kuputika zvishoma muamvura sodium chloride (0.9%).
The final Linzess iri muchimiro chemahombekombe akaomeswa egelatin ane maLinaclotide-akafukidzwa ndebvu. Calcium chloride dihydrate, L-leucine, titanium dioxide, microcrystalline cellulose, gelatin, pamwe chete ne hypromellose zviri pakati pezvinhu zvinoshanda muLinzess
Kana zvasvika kune Linaclotide inoshandisa, vanhu vanoishandisa sekurapa nekuda kweiyo chaizvo matumbo ematambudziko akadai seisingatsanangurike bowel syndrome iyo inozivikanwa nekugunzwa uye isingagumi idiopathic kudzimbira.
Linaclotide ye chinokanganisa bowel syndrome zviratidzo
Irritable bowel syndrome (IBS) chirwere chakareba chinotadzisa matumbo kushanda zvakanaka. Ichi chiratidzo cheLinaclotide chinonzi zvakare chinonzi spastic colon uye dzimwe nguva chinoshanda chirwere chematumbo. Zviratidzo zvikuru zvekushushikana uku kupukunyuka, kuora uye kurwadziwa mudumbu nekugwinyisa kana kuchinjanisa nemanyoka.
Muchidzidzo chekiriniki kumisikidza kugona kweLinaclotide yekuzorodza isinga tsaradzi matumbo zviratidzo, varwere vakuru vaishandiswa mune mbiri dzakateedzeredzwa, multicenter miedzo. Muedzo wekutanga waisanganisira varwere ve800 vakaiswa pa290 mcg mazuva ese ezzess kurapwa kosi iyi 804 ikapihwa kune yechipiri iyo yaive pane placebo.
Varwere vese vanoshandiswa mumapoka ese maviri vakasangana IBS Roma II maitiro uye vaitarisirwa kuwana zamu rekurwadziwa kwemudumbu re3 pazere zero pachiyero kusvika kune gumi uye zvakapetwa zvitatu zvakazara zvega zvega matumbo vhiki yega yega kurapwa. nguva.
Pakupera kwenguva yekurapwa, varwere vaive pane kurapwa kwemaitiro ekurapa vakawana zvakanyanya vavandudzwa zviratidzo zveBIS kana zvichienzaniswa nevavanopindirana navo.
Spontaneous matumbo ekufamba mafambiro
Mari yenguva uye nesimba remuviri munhu anoshandisa kuti apfuure.
Dumbu kurwadziwa kurwadziwa
Izvo zvakasimbisa zvechokwadi Linaclotide chiratidzo chechirwere chinoshanda cheBIS.
Linaclotide ye Chirwere Idiopathic Constipation (CIC) zviratidzo
Muchidzidzo kuongorora kushanda kweLinzess ye CIC zviratidzo zve manejimendi, varwere vakuru vane chirwere chekurwara chekukutu vakaiswa mune zvisina kurongwa, multicenter kliniki miedzo, zvakafanana nezve kumusoro-yakatsanangurwa kudzidza kweBIS.
Mumwe nemumwe wevarwere akange asangana neiyo yakagadziriswa Roma II inoshanda kuvimbwa maitiro uye vakagamuchira 72mg, 145 mcg Linzess, 290 mcg Linzess kana placebo kurapwa zuva rega rega munguva ye12-vhiki yekurapa.
Pakupera kwenguva yekurapwa, vatsvagiri vakacherechedzawo chiratidzo cheCIC kuvandudza pakati pevarwere vaive paLinzess kurapwa sekuenzaniswa neavo vaive pane placebo. Kunyanya, ivo vakasangana nekukwidziridzwa padanho pamusoro pechitsiko frequency, zvigaro kusingagumi uye matumbo kufamba kunetseka huwandu.
Pakati pematatu ese eLinzess doses, aive nemahure mashoma emabatiro kunze kwekupa zvakakosha CIC zviratidzo. Izvi zvinoratidzira Linaclotide chiratidzo chekugona kwayo kurapa CIC.
Kusiyana nemimwe mishonga inoshandiswa pakurapa zvataurwa pamusoro peutano nyaya, Linaclotide mashandiro akasiyana- haina kubatwa mumuviri wako. Linaclotide michina kunoitika chete mumatumbo ako nekuwedzera kweropa, zvichikonzera kugadzirisa matumbo nekubvisa marwadzo anogona kunge ari kubva mudumbu rematumbo.
Linaclotide (Linzess) inoita kuti matumbo abudise mvura yakawanda nekuwedzera kugadzirwa kwe cyclic guanosine monophosphate.
Kana Linaclotide painoshandisa simba rayo kuwedzera mvura mumatumbu ako, chikafu chinofamba nekufamba nekukasira uye chinyararire kugadzirwa. Izvi zvinogadzirisa zviratidzo zvekukasira kwekufamba-kwakanangana nezviratidzo sekutumbuka, mudumbu / kusagadzikana kwemudumbu uye kusakwana kwematumbo kufamba.
Paunoita a Linaclotide tenga, hongu nezvekunyorerwa nachiremba, zvakakosha kuve nechokwadi chekuti iwe unoverenga gwara rekurapa rauchapihwa nachiremba wako wemishonga usati watora mushonga. Chinongedzo chinokuudza chakakodzera Linaclotide dhiidhi yako, iyo chaiyo dosi yedanho pakati uye yakakurudzirwa kurapwa kosi nguva.
Kana iwe uchida chero kujekeswa pa Linaclotide dosi, usazengurira kuonana nachiremba wako kana wemishonga kuti usatize Linaclotide madhara kana Linaclotide kusangana.
Kuve mushonga wemuromo, Linaclotide inofanira kutorwa nemuromo. Iwe unofanirwa kuitora apo mudumbu musina chinhu, zviri nani 30 maminetsi usati watora chikafu chako chekutanga muzuva. Mushonga wekupedzisira weLinaclotide uri mune fomu ye capsule uye unofanirwa kumedzwa yakazara. Haufanire kutyora kana kutsenga Linaclotide macaps.
Nekudaro, kana iwe ukaedza kumedza macapota asi pasina, unokwanisa kuvhura uye kusanganisa zvirimo muapurojisipuni. Wobva wamedza kusanganisa kwacho nekukurumidza uye sezvazviri-usazvibata. Sanganisa chete huwandu hwaunofanirwa kutora panguva iyoyo nekuti kuchengeta iwo musanganiswa kuchaita kuti mushonga urase kushanda kwawo.
Kana iwe usina applesaize, unogona kushandisa mvura senzira. Kuyera imwe eunzi kana 30mm yemvura, vhura iyo yakatemwa Linaclotide dhata capsules uye durura zvirimo mumvura. Bhururuka mvura- Linaclotide yemukati yemasekonzi 20 masekondi uye wozoinwa nekukurumidza. Sezvakangoita applesaize musanganiswa, usabiridzira izvo zvirimo- umedze zvakakwana.
Pane iyo iyo mushonga unosungirwa kutumirwa kuburikidza nasogastric kana gastrichubhu, tsvaga kutungamirirwa pane iko kutonga kubva kune yako wemishonga kana chiremba. Nekudaro, heino maitiro akajairwa ekutonga kwetubhu.
Kuyera 30 ml yemvura yakachena uye yekamuri-tembiricha mvura uye kuiisa mune yakachena mudziyo.
Vhura iyo Linaclotide capsule uye durura zvayo zvese (beads) mumvura
Pakati pemvura uye Linaclotide mabhebhi nekuisa musanganiswa zvinyoro nyoro kwete pasi pe 20 masekondi.
Dhizaini Linaclotide bead-mvura musanganiswa mune kurudyi syringe nepipi yakafanana neye catheter uye saizi chaiyo. Wobva waendesa iwo musanganiswa kuva nasogastric kana gastric tube inoshandiswa nemurwere nekushandisa zvakatsiga asi nekukurumidza kumanikidza kweanenge 10 mL / 10 masekondi pane syringe.
Muchiitiko ichocho mamwe maLinaclotide mabhebhi akasara mumudziyo, wedzera 30ml yemvura yakachena mukati maro, bhururudza musanganiswa, uye tungamira sezvakamborondedzerwa.
Paunenge iwe waitwa nekutarisa musanganiswa weLinaclotide mabhebhi uye mvura, shandisa inosvika 10 ml yemvura kupenya yehutongi yehubhu.
Iyo yakakodzera Linaclotide dhesi inosiyana kubva kune mumwe munhu kuenda kune mumwe, zvichienderana nechimiro icho chinoitirwa kubata pamwe chete nemhinduro yeumwe kumushonga. Zvekare, zvakakosha kuziva kuti mushonga haufanirwe kushandiswa nevanhu vasina kusvika zera ramakore 18.
Vana vadiki vari panjodzi huru yekusangana nezvakakomba Linaclotide mativi vanofanira kushandisa mushonga.
(1) Usual Adult Dose yeIrritable Bowel Syndrome
Kune munhu mukuru anotambura neIrritable Bowel Syndrome iyo inoperekedzwa nekugumburwa, anofanira kutora dhigiri reLinaclotide re290 mcg zuva rega rega. Sezvambotaurwa, mushonga unofanirwa kutorwa padumbu risina chinhu. Kuverengera izvozvo, tora isati yako yekutanga kudya pazuva.
(2) Usual Adult Dose yeKunyaradza
Maererano neUS Food uye Drug Administration, yakakurudzirwa Linaclotide dheti kumunhu mukuru ane chisingaperi idiopathic kuvimbiwa (CIC) ndeye 72 mcg.
Nekudaro, 145 mcg danho inogona zvakare kukurudzirwa kumurwere mukuru neCIC, zvichienderana neyake mharidzo uye kushivirira. Unogona kubuda linzess 72 mcg ongororo kuti uwane zano rekuti iyo dosi inoshanda sei uye vashandisi vakabatsirwa nayo.
Zvinoenderana nekusiyana kwakaita 72 mcg kuongororwa, pakati pezvimwe zvekudya zvine chekuita nemushonga, murwere ane zvataurwa pamusoro pehutano nyaya uye achitarisira kubatsirwa kubva mukukwanisa kwayo anofanirwa kuishandisa kakawanda kuwana izvo zvaunoda mhinduro. Kunze kwezvo, inofanira kutorwa panguva imwechete zuva rega rega mukati menguva yakatarwa yekuraira nguva.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Linzess inogona kunge ichikonzera kupindirana kweLinaclotide nemishonga dzakasiyana siyana. Saka nekudaro, iwe unofanirwa kuzivisa kuna chiremba wako nezve chero mushonga wauri parizvino usati watanga kuushandisa (Linaclotide).
Zvakare, vakadzi vane pamuviri vanofanirwa kuve nekungwarira kukuru kana uchifunga nezvekutora Linaclotide nekuti mushonga unogona kuisa njodzi yakakosha kune fetus. Vanofanira kutsvaga kurapwa nanachiremba kuti vazivise kuchengetedzeka kwavo uye kwevacheche vasati vazvarwa ivo vanofanira kunwa mushonga. Nyaya imwechete iyi inoshanda kuna amai vanoyamwisa uye avo vaunotarisira kutora pamuviri iwe uchishandisa mushonga.
Nekudaro, kunyangwe kana vaine CIC kana Irritable Bowel Syndrome, varwere vari pazasi pemakore e6 haafanire kutora Linzess poda (851199-59-2). Kliniki kuedza kwakaona kuti mushonga uyu wakakonzera kufa mune mbereko dzechidiki neane makore akaenzana pasi pemakore 6 muvanhu.
Saka nekudaro, mushonga unorambidzwa kune varwere vasati vasvika zera sezvo zvakavaisa panjodzi huru yekutanga kuora uye pamwe nekukuvadza kwakanyanya.
Kunze kwezvo, kune data yekiriniki inoratidza kuchengetedzeka uye kushanda kwekusanzwanana pakati pevarwere vane makore 6 makore kusvika 17 makore. Saka nekudaro, kana ari mwana kana achiri kuyaruka pazera 18 makore anoda zororo reICI kana BIS, zano rechiremba rinofanira kutanga kutsvaga.
Unogona kutora kusvika kumavhiki maviri usati waona kuzorodzwa kwechiratidzo semushonga. Naizvozvo, iva anoshivirira zvishoma nazvo. Enderera kuzvishandisa sekurairwa.
Nekudaro, kana chiratidzo chako chisiri kuvandudzika kana kuwedzera kukuvadza kunyangwe mushure mekushandisa zvinyadzo, usatore dhivha inodarika iyo yakatarwa. Haufanire kuzviita mune chero zviitiko. Pane kudaro, zivisa chiremba wako kuti asarudze chikonzero chekusapindirana kwemushonga uye zano pane inotevera yekuita.
Zvinokurudzirwa kuti usashandise Linaclotide kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge warwadzisa, kana matumbo ako aine chinhu chinodzivirira.
Kana iwe ukaitika kupotsa danho reLinaclotide, usayedze kugadzirira iyo yakarasikirwa dheti. Kanganwa nezvazvo uye ramba uchinotora doses inotevera zvakanyanya panguva yakatarwa.
Kana iwe kana mudiwa wako ukatora mwero weLinaclotide (chirwere chakawandisa), zvinoitika zvacho zvinofanirwa kuudzwa nachiremba nekukurumidza. Neimwe nzira, unogona kubata Poison Rubatsiro masevhisi nekufona 1-800-222-1222.
Zvinoenderana nezvakasiyana Linaclotide wongororo uye zvidzidzo zvesainzi, zvinotevera ndizvo zvakajairika Linaclotide madhara:
Kurwadza kwepadumbu kana kusagadzikana
Zviratidzo zvinotonhora zvakaita semanyowa / mhanya mhino, kurwadziwa kwemutsipa kunorwadza kana kutsvedza
yakatsvuka kana yemumhino mhino
rectal kubuda ropa
Kunyangwe zvisingawanzo, iwe unogona zvakare kuona imwe yeinotevera Linaclotide madhara:
Kudzvinyirira kana kuenderera
Dhigiri iyo inoperekedzwa chizunguzungu kana manzwiro ayo anoita kuti unzwe senge urikuda kubuda
Kuvhiringidzika zvisina kujairika
Kuwedzerwa uye kunopfuurira nyota
Utsi husina simba
Kurwadza kukuru kwemudumbu
dema, reropa, kana tarry fund
kumeso, muromo, rurimi, kana kuzvimba kwehuro
Unofanirwa kutsvaga rubatsiro rwechimbichimbi kana ukasangana nekuzvimba pazvikamu zvambotaurwa, dambudziko rekufema kana mikoko.
Mune imwe yemamwe mashoma Linaclotide mhedzisiro, iwe unofanirwa kurega kushandisa mushonga uye bvunza chiremba wako nekukurumidza kuti uwane kutungamirirwa.
Linaclotide kudyidzana zvinogona kuitika kana Linaclotide ichishandiswa pamwe chete nemamwe madhiragi kusanganisira iwo anopfuura-the-counters, mavhitamini zvigadzirwa, mishonga yemakwenzi uye mishonga yakatemwa. Mimwe yemishonga yakataurwa inogona kukonzera kupindirana kweLinaclotide inosanganisira:
Aspirin Yakadzika Simba
Dulcolax (kudyidzana kudiki)
Metamucil (kudyidzana kudiki)
Levothyroxine (kudyidzana zvine mwero)
Metoprolol Inokora ER
8. Ndeupi mutsaukos pakati Linaclotide uye lubiprostone?
zvose zviri zviviri Linaclotide uye lubiprostone ndeaDFA-anotenderwa zvinodhaka zvekusingaperi idiopathic kuvimbwa uye kusatsamwa matumbo chirwere mune vakuru. Kana iwe uchida kuwedzera matumbo ekumbira, unogona kusarudza chero ipi kana mbiri.
Nekudaro, ivo vane huwandu hwakati siyanei maererano ne:
(1)Iwo awo makirasi
Lubiprostone ndeye yekirasi yezvinodhaka inozivikanwa se chloride chiteshi activators. Kune rimwe divi, Linaclotide (Linzess) inhengo yekirasi yezvinodhaka inonzi ina guanylate cyclase-C agonists.
(2)Door yezuva nezuva
Nepo inokurudzirwa yeLinaclotide dose inofanirwa kutorwa kamwe chete pazuva, kunyanya isati yadya, Lubiprostone inowanzo kutorwa kaviri pazuva. Naizvozvo, kana ukatadza kurangarira kuti utore mishonga yako zuva rega rega, Linaclotide ichave iri sarudzo yakanaka kwauri.
Chimwe chinhu chinosiyanisa iyo miviri maererano nedhii huwandu iyo imwe inofanira kutora kamwechete. Semuenzaniso, yeCIC, iyo inokurudzirwa yaLinaclotide kamwechete dhata ndeye 72 mcg nepo iyo yeLubiprostone iri 8 mcg.
Mumwe musiyano Linaclotide poda (851199-59-2) uye lubiprostone iri maererano nekudyidzana kwezvinodhaka. Nezve pamusoro peiyo whopping 58 zvinodhaka inozivikanwa kuti inopindirana neLinaclotide, kusangana kweLinaclotide kwakanyanya zvakanyanya kana tichienzaniswa ne lubiprostone iyo inosanganiswa nekudyidzana kweimwe chete yedhiragi.
Linzess yakatenderwa pa30th Nyamavhuvhu 2012 nepo kubvumidzwa kwe lubiprostone kwakaitika muna Ndira 31, 2006
Paunenge uine chikafu mudumbu mako uye iwe uchitora Linaclotide, zviratidzo zvegumbo rako senge manyoka, kurwadziwa mudumbu pamwe negesi zvinogona kuwedzera zvakanyanya, nekuda kweLinaclotide-chikafu chekudyidzana. Kana iwe ukatanga kurwara nemanyoka zvakanyanya uye uchitora mumwe mushonga wemuromo, kupinda kwewekupedzisira kunogona kukanganiswa.
Kuti uderedze kusagadzikana kwegomarara nekuda kwekudyidzana kwekudya, Linaclotide inofanirwa kutorwa padumbu risina chinhu.
Kune rimwe divi, kune yesainzi yakavezwa chiitiko cheLubiprostone-chikafu chekudyidzana Nekudaro, izvi hazvireve kunze kwekudyidzana kunogona kuitika. Saka nekudaro, zvakakosha kutsvaga kwakawanda kujekeswa panguva yakanaka yekushandisa mushonga kubva kune wako wekuchengetedza hutanho
(6)Njodzi ye fetal mune vanaamai vane pamuviri
Parizvino, chikamu chekutsvakiridza kwakakodzera uye kuongororwa kweLinaclotide kunoratidza kuti Lubiprostone inogona kukonzera kukuvadza pane fetus kana amai vane pamuviri vatora iwo mushonga. Kune rimwe divi, hapana kana wongororo imwechete inoratidza kuti Linzess inogona kukonzeresa fetus kana ikatorwa nemukadzi anotarisira.
Masayendisiti vanoti izvi zvakachengeteka kusvika pakunyorwa pasi mushonga. Nekudaro, njodzi haigone kubvumidzwa kunze zvizere sezvo kutsvagurudza kwakawanda kuri kuitwa izvozvi kuti uzive kuchengetedzeka kana njodzi yemushonga kumwana asati aberekwa.
Naizvozvo, kana ichida kutora Lubiprostone kana Linaclotide, amai vane pamuviri vanofanira kubvunza chiremba nezve iko kukodzera kwesarudzo.
Kunze kweCIC, lubiprostone inogona b
e yakashandiswa sekurapa kweOpioid-indedu kuvimbwa (OIC) pamwe neIrritable bowel syndrome ine kuvimbwa mune vakadzi vane angangoita 18 makore.
Kana zvasvika paLinaclotide, kunze kweCIC, inobata zvakare isinga tsaradzi bowel syndrome iyo inoperekedzwa nekugumburwa (IBS-C) mune vakadzi nevarume. Haisi kushandiswa sekurapa kweOIC.
Kana zvasvika kune Linaclotide mutengo, yakakwira zvishoma kudarika iyo ye lubiprostone. Parizvino, mutengo weLinaclotide ungangoita $ 450 yemakapu e30 nepo 60 macapiritsi e lubiprostone angangoita anenge $ 396. Nekudaro, mitengo yacho inosiyana kubva kune mumwe mutengesi kuenda kune imwe uye nguva nenguva.
Iyo inogadzira Linaclotide ikambani inozivikanwa seAllergan apo lubiprostone iri chigadzirwa chekambani yeSurampo.
Zvisinei nemisiyano iri pamusoro apa, zvakakosha kuti uzive kuti lubiprostone neLinaclotide zvinotengeswa kune vatengi mune yemumuromo kaputuru fomu uye ivo havana majeniki. Zvakare, mishonga iyi miviri inoda kunyorerwa nachiremba kune imwe kuti uiwane kubva kune chero mutengesi.
9. chii rumwe ruzivo pamusoro Linaclotide ndinofanira kuziva here?
Sezvimwewo chero zvinodhaka, Linaclotide poda (851199-59-2) kana macapukeni anofanirwa kuchengetwa pasvika mbichana kuti asavhiringidze. Zvakare, kunge uri mushonga wekunyorerwa, vamwe vanhu vangave vachiedzwa kuti vapewo mumwe mushonga nevamwe kuti vadzivise kunetseka kwekuenda kuna chiremba kunopihwa mishonga.
Nekudaro, kugoverana kweLinaclotide kune njodzi nekuti chiremba anofanirwa kuisa zvinhu zvakawanda asati aisa mushonga uye nekupfuura nhanho yacho kunogona kuguma nemhedzisiro yakaipa.
Kana iwe uchida kuita kuti Linaclotide itenge, iwe unofanirwa kuziva kuti munyika zhinji, kusanganisira US, iwe unoda chiremba kuti uwane iwo mushonga. Izvi hazvina basa kuti unofunga kutenga icho online kana pamusoro-the-counter.
Kana zvasvika pakuchengetera, iyo temburicha inokurudzirwa yekuchengetedza Linaclotide 851199-59-2 ndeye 25 ° C (77 ° F). Kunyangwe iwe uri kubata neLinaclotide poda kana mapiritsi, mushonga uyu unofanirwa kuchengetwa munzvimbo isina hunyoro uye, haufanire kupatsanurwa kana kuiswazve. Panzvimbo iyoyo, chengetedza mushonga wacho wose mumidziyo yawo yekutanga.
Zvakare, simbisa kuti mudziyo wacho wakavharwa kwazvo ne desiccant yavo mukati kuti usanyorova.
Kunyangwe iwe uchida kutenga Linaclotide 851199-59-2 yekushandiswa kwemaindasitiri, Linaclotide yekutengesa kana zvimwe zvinoshandiswa Linaclotide, simbisa kuti unoiwana kubva kune inozivikanwa uye yakavimbika sosi. Iyo online Linaclotide ongororo inogona kukutungamira iwe kune mutengesi akanaka.
Zvikasadaro, pasina kuita zvakakodzera kushingairira, iyo isina / mutengesi wepamhepo anoti ane chokwadi Linaclotide yekutengesa zvinogona kuzonzi zviri kutengesa zvigadzirwa zvebanga kana kuba mari yako yaunenge uchiwana zvakaoma.
Andresen, V., Camilleri, M., Busciglio, IA, Grudell, A., Burton, D., McKinzie, S.,… & Currie, MG (2007). Mhedzisiro ye5 mazuva linaclotide pane yekufambisa uye yekubatira basa mune zvevakadzi vane kushungurudzika-predominant irritable bowel syndrome. Gastroenterology, 133(3), 761-768.
Chey, WD, Lembo, AJ, Lavins, BJ, Shiff, SJ, Kurtz, CB, Currie, MG,… & Baird, MJ (2012). Linaclotide yekutsamwa isinga tsamwe bowel syndrome nekumisikidza: 26-vhiki, zvakasarudzika, mapofu-maviri, placebo-inoyedzwa muyedzo kuti uongorore kushanda nekuchengeteka. Chinyorwa cheAmerica che gastroenterology, 107(11), 1702.
Cuppoletti, J., Blikslager, AT, Chakrabarti, J., Nighot, PK, & Malinowska, DH (2012). Misiyano inokanganisa ye linaclotide uye lubiprostone pakudzoreredza epithelial cell barriers zvinhu uye cellular homeostasis mushure mekuratidzira kune cell stressors. BMC pharmacology, 12(1), 3.
Johnston, JM, Kurtz, CB, Drossman, DA, Lembo, AJ, Jeglinski, BI, MacDougall, JE,… & Currie, MG (2009). Kudzidziswa kwePilot pamhedzisiro ye linaclotide mune varwere vane kupomhodza kusingaperi. Chinyorwa cheAmerica che gastroenterology, 104(1), 125.
Lembo, AJ, Kurtz, CB, MacDougall, JE, Lavins, BJ, Currie, MG, Fitch, DA,… & Johnston, JM (2010). Kunyatsoshanda kwe linaclotide kune varwere vane kupomhodza kusingaperi. Gastroenterology, 138(3), 886-895.
Lembo, AJ, Schneier, HA, Shiff, SJ, Kurtz, CB, MacDougall, JE, Jia, XD,… & Jeglinski, BI (2011). Miedzo miviri yakasarudzika yeiyo linaclotide yekurwara kwekupora. New England Journal of Medicine, 365(6), 527-536.
Iyo yakakosha ruzivo rwe leuprorelin acetate side athari, dosage